22 Kymco iFlow – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
22 Kymco iFlow အိန္ဒိယက e-Scooter startup ကနေလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ် 22 Motors က ထိုင်ဝမ် Scooter အမှတ်တံဆိပ် Kymco, ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံး Scooter ထုတ်လုပ်သူတဦးနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ။ Kymco ကကိုးဆယ်အတွင်းပထမဦးဆုံးလျှပ်စစ် Scooter ရဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
22 Motors ကအဆိုပါမှာ iFlow Scooter တင်ပြ အိန္ဒိယအော်တိုကုန်စည်ပြပွဲ အဆိုပါ Scooter ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ရောင်းချခဲ့လိမ့်မည် 2018. ခုနှစ် 22 Kymco ။
အဆိုပါ iFlow 60 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းများအတွက်အစွမ်းထက် 2,100 ဝပ် Bosch ရဲ့လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter 80km ၏ထိရောက်သောမောင်းနှင်မှုအကွာအဝေးနှစ်ခုဖြုတ် Kymco IONEX swappable လီသီယမ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီ၏တာဝန်ခံအချိန်5နာရီကြာသည်။
အဆိုပါ IONEX ဘက်ထရီ, သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသောအလင်းအလေးချိန်ဖြစ်ကြပြီး Kymco ပေးအထူးအရောင်းစက်တွေမှာဖလှယ်မှုသို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့အိမ်မှာအားသွင်း အသုံးပြု. မယ့် 1 နာရီအတွက်တရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ကြာရှည်ခံမှုရှိပါတယ်။ 22 Kymco ဟာ Scooter အပေါ်5နှစ်အာမခံပေးထားပါတယ်။
IoT Scooter (မိုဃ်းတိမ်ကိုချိတ်ဆက်မတ် Scooter)
အဆိုပါ Scooter အများအပြားထူးခြားသောတီထွင်မှုရှိပြီးတစ်ဦး IoT ကိရိယာကဲ့သို့အချိတ်ဆက်ကိုမိုဃ်းတိမ်သည်။ ထိုသို့သော pothole-detection နဲ့သတိပေး, GPS, geofencing (anti-theft), အသိဉာဏ်တိုက်မှု detection နဲ့ဝေးလံခေါင်သီရောဂါရှာဖွေရေးအဖြစ်အဆင့်မြင့် features တွေပေးစွမ်းသည်။
အဆိုပါ Scooter တစ်ပြောင်းပြန် mode ကိုမြန်ဆန်အရှိန်တစ်ခုဆွဲ-mode ကိုရှိပြီးတောင်ကုန်း-ကူညီရန် mode ကိုအတူကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံး Scooter ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter ဖြစ်သော CBS နှင့်အတူရှေ့နှင့်နောက် disc ကိုဘရိတ်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter နှစ်ခုခမောက်များအတွက်အာကာသကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းရဲ့ buddy ထိုင်ခုံအောက်တွင်ကြီးမားသောသိုလှောင်ရန်နေရာရှိပါတယ်။
Rogue, Matt အပြာရောင်, Couture ဘရောင်း, Fury နီ, စပျစ်သီးပျဉ်က Black, လရောင်ငွေနှင့်အဖြူရောင်ချိုးငှက်: အဆိုပါ Scooter ခြောက်လအရောင်ရရှိနိုင်
ကို 2020 KYMCO ကိုမော်ဒယ်များ